देश कल्लाई जिम्मा दिने ? | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो देश कल्लाई जिम्मा दिने ?
on: December 21, 2018 तीतो मीठो
देश कल्लाई जिम्मा दिने ?
अल्पमतका सरकारहरूले काम गर्न सकेनन् वा पाएनन् भनेर देश बहुमतको सरकारलाई जिम्मा लाउने भनेकोमा दुई तिहाइ सरकारलाई नै जिम्मा लगाए जनताले । त्यो पनि दुई कहलिएका कम्युनिष्ट दलहरू एकै भान्सामा खान थालेको देखेर । तर बलियो भनेको सरकारले त देश सल्लाहकारहरूलाई पो जिम्मा दिएछन् त । फेरि सल्लाहकार पनि कस्ता कस्ता । सलहका आकार प्रकार जस्ता, कति कति । जताबाट पनि जनताकै पसिनाको खति । दुई तिहाइले गर्ने छाँटकाँट नदेखेकोले होला हिजोआज एकथरीले राजालाई दिऊँ पनि भन्न थालेका छन् । तर, राजालाई पनि हेरेकै हो । दौरा सुरुवाल पनि फेरेकै हो । तर भएन ।
तुल्सी गिरीलाई दिन पा’ भए हुन्थ्यो कि भन्नेहरू पनि छन् । तर, उनी त गए । अब कतैबाट कसैले नगरेपछि पशुपति (राणा होइन नि) नाथले त हेर्लान् भन्नेहरू पनि छन् । तर, पैले राजाले सधैं पशुपतिनाथले सबै नेपालीको कल्याण गरून् भनिरहन्थे । तर अरूको त परै जाओस्, उनकै पनि कल्याण गरेनन् क्यारे ।
अब देश बनाउने जिम्मा कसलाई दिने त ? कांग्रेसलाई दिऊँ, के दिनु ? बचेखुचेको रूख पनि खंग्रङ्गै पारिसके । कमल थापालाई दिऊँ, उनको गाई कहिले ब्याउने हो थाहै छैन । यी रवीन्द्र सविन्द्रलाई दिऊँ, यो फुच्चाफुच्चीको पार्टी भनेर कसैले नि पत्याउन्नन् कि ? मैले मात्र दिऊँ भनेर भएन ।
अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निर्णय, आदेश ठोकेका ठोक्यै छन् । सचिवहरूले पनि ऐजन ऐजन गरिरहेकै छन् । तर, कामहरू हुन सकिरहेका छैनन् । जीएमआरले उपल्लो कर्णाली बनाउँछु भन्थ्यो । अहिले त कल्लाई हो बेच्ने कुरा गरिहिँड्या छ । यता सतलजले त अरुण ३ बनाएरै छाड्छु भन्थ्यो । त्यो उसले पनि बेच्ने रे भन्ने पो हल्ला छ । युवामै बूढीगण्डकी बन्ने कुरा सुन्नेहरू बूढाबूढी भएरै मर्ने भए, तर बूढीगण्डकी बनेन । आर्मीलाई फास्ट ट्र्याक दिने भनेकोमा पनि त्यसभित्र लफडा झगडा थुप्रै देखिन्छ । मेलम्चीको पानीको सपना फेरि एकपटक तुहिएको छ ।
यता वाइड बडी जहाज आए देशकै कायापलट हुन्छ भनेको नि भएन । न धरहरा बन्यो, न त भूकम्पपीडितका घरहरू बने । यसरी न पूर्वाधार बने, न गरीबका लागि काम र मामका लागि आधारहरू नै बने । यसो गरे नि, उसो गरे नि, केही गरे नि भएन ।
अब भारतलाई दिऊँ, मान्दैन, चीन रिसाउने डर छ उसलाई । चीनलाई दिऊँ, भारत चिढिने डर छ उसलाई पनि । अब कतैबाट पनि हुँदैन भने बरु यै युनिभर्सल पिस (यूपी) फेडरेशनवालालाई पो दिने हो कि ? किनकि नेपालमा अरूले गर्न नसकेको काम उसले गरेर देखायो । बिम्स्टेक सम्मेलनमा मोदी र ओली मिलेर बोलाउँदा पनि नमानेकी आङ सान सुचीलाई यूपीका सेनामेनाले त टुप्लुक्कै नेपालमा ल्याएर देखाइदिए । नेपालका त मै हुँ भन्ने ठूला कम्युनिस्टदेखि कांग्रेसका कतिपय सांसदसम्म लुसुक्क हान मुनले बोलाएको होटलमा पुगेर यूपीको झन्डामुनि झुकेको पो देखियो । भनेसी अब अरू पार्टी खोज्न छाडेर देश बनाउने जिम्मा त्यै यूपीलाई पो दिने हो कि कमरेड ?
उल्लाई जिम्मा दिन पाए त दुइटै हातमा लड्डु हुने । नेता, कर्मचारीले काम गर्न सकेनन् भन्ने अवगाल पनि नआउने । ढाँटेर, छलेर, तर्साएर घरभाडा, पेट्रोल, ड्राइभर, पीएको तलब, घूस, कमीशन आदि इत्यादि लिनुपर्ने दुःखबाट पनि मुक्ति पाइने । त्यसको दोब्बर ‘प्रभुकृपा’ सुतीसुती यूपीबाटै एकमुष्ट हातलागी हुन सक्ने !
फेरि यूपीको अलि बढी नै विरोध हुन थाल्यो भने के गर्ने नि ? यहाँनेर भने समस्या आउन सक्छ । त्यसो भए देश बनाउने जिम्मा अब कसलाई दिने त हौ ? हे ! सृष्टिकर्ता ! नेपालप्रति दयादृष्टि दिने पालो कहिले छ हँ ?
The reason why so many politicians failed in Nepal is because they tried to solve fictitious “political problems” which never existed in the first place and was created by themselves. Nepal’s problem has always been technical not political but these political quacks have been prescribing wrong medicine for decades because that’s the only thing they know. Despite all this Nepal is not doing so badly. 5-6% economic growth is all that we care about now and if current government can sustain that for five years then I will give them pass mark. Maybe they should try to hireafew hundred Nepalese with higher degree like phd and work/research experience from developed countries in various technical/scientific areas without having to go through public service commission. This will provide major boost to the health of the bureaucracy.